Ukwakheka Kwesigodi, Ukuqanjwa Komuzi Wesibongo Esisodwa – iAfrika
Isigodi indawo eyakhelwa ngabantu besibongo esisodwa isikhathi esiningi. Bese beba nomholi wabo okuvamise ukuthi kube ngumuntu omdala kubona ogcina eseyinkosi yabo. Labantu iningi labo liyazalana ngenxa yesibongo esifanayo kodwa futhi kuyenzeka kubekhona nabafika bezocela indawo yokuhlala endaweni bengebona abozalo lwakulowomuzi. Ezindaweni zasemakhaya abantu bayasikelwa indawo yokuhlala ngumholi womphakathi noma ingane uma isikhulile isisezingeni lokuqala umuzi wayo isikelwe ngumzali wayo indawo. Akubo bonke abantu abavunyelwayo ukuthi bakhe endaweni, ziningi izinto ezibhekwayo ezingaba nomthelela wokuthi uyayithola indawo kodwa futhi kwakwenzeka ukuthi umuntu enqatshelwe ukuhlala endaweni.
Njengakuzo zonke izindawo ukukhula kwesigodi kuqala lapho abazali bethola abantwana. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi bazokhula nabo bakhe imizi yabo ngelinye ilanga baphume emakhaya. Uma kuzelwe ingane yomfana izokwakha umuzi wayo endaweni kuthi eyentombazane iyoganela kwesinye isigodi. Njengoba sivezile ngenhla ukuthi isigodi sakhiwa yisibongo esisodwa kakhulu kubalulekile ukuthi imizi ikwazi ukuhlukaniseka, hhayi ngokwesakhiwo kodwa ngokozalo. Umuzi nomuzi ubanegama obizwa ngalo obekwenza kubelula nakumuntu ofuna indlela noma umuzi othile uma ewubiza ngegama lakhona. Ukuqanjwa komuzi kwakuncike egameni likamama ozala lowomuntu ngoba ubaba wekhaya kwakwenzeka abe nesithembu njengokuthi kwaGwala eMfeni. Lokhu kwakusiza kakhulu.
Indlela yokuphila endaweni
Njengakuyo yonke imizi enemithetho nesigodi sinemithetho esiphila ngaphansi kwayo kuthi lowo ongumholi wendawo noma inkosi uthathwa njengobaba. Ziningi izinto ezilandelwayo endaweni ngabantu abakhele indawo, noma izivakashi noma yilabo abasuke bezofuna ukuzokhonza endaweni. Njengokuthi uma kunesivakashi emzini othile kufanele kwaziswe inkosi ukuthi kunomuntu okhona ongeyena owasendaweni futhi uzohlala isikhathi esingakani endaweni. Lokhu kwakwenzelwa ukuvimbela ubugebengu endaweni. Lokhu kwakwenziwa noma kukhona ingane ezelwe, umuntu ogulayo noma oshonile.
Imithetho yesigodi ngasinye yayingafana nesigodi abakhelene naso. Babekwenza lokhu ukuze indawo ibe nomthetho abawulandelayo bonke kungabi nobugebengu. Ngoba phela abantu abafani amahlongandlebe akhona noma yikuphi kodwa kwakunemithetho futhi ebekiwe kulabo abaphula umthetho. Isijeziso sasihluka kuye ngokuthi umuntu wayenze liphi icala. Isigwebo kwakwenzeka ukuthi abanye abantu badingiswe endaweni, into ebiyenza ukuthi axoshwe ukuthi mhlawumbe utholwe ethakatha, noma esinye isiphi isiga esibi asenzile ubexoshwa. Umuzi nomuzi ubanenhloko yawo ethatha izinqumo zawo. Umuzi awukwazi ukuthi ungabi nayo lenhloko ngoba uzofana nongekho, ungahlonipheki endaweni. Bekuthathwa umuntu omdala ekhaya ukuthi kube nguye ohola umuzi lowo, uma sekudlule emhlabeni obephethe. Bekwenzeka ukuthi ngesinye isikhathi agule lowo obengumholi, bekuwumsebenzi wakhe ukuthi akhethe lowo ozongena ezicathulweni zakhe.
Ukuhlangana kwezigodi ngokuhlukana kwazo
Izigodi ngokuhlukana kwazo bezazana ukuthi ziphila kanjani futhi ziholwa ngobani. Ziningi zinto ebezenzeka endaweni ebezihlanganisa lezigodi ezakhelene. Njengokuthi bebehlangana uma kunemicimbi noma kuganiselwana. Nokuthi bekwenzeka kufike omunye umuntu wakwesinye isibongo azocela ukukhonza enkosini yakwesinye isibongo nesigodi ekungesona sakubo, noma efuna inxiwa. Lomuntu ubenikwa inxiwa kodwa kude ngoba ungesinye isibongo anikwe nemfuyo uma engenayo, alime akhulise izingane zakhe.
Umuntu ovakashile ngaphandle kokuthi kubikwe enkosini yesigodi, lowomuntu kwakubalulekile ukuthi ngosuku olulandelayo aziveze enkosini ukuze aziwe, afakwe nemibuzo ukuthi ungubani futhi uzalwa ubani, kungani ezovakasha njalonjalo. Kwakubalulekile ukuthi umuntu akhulume iqiniso ngoba kwakunezindlela zokuthi kutholakale iqiniso lokuvakasha endaweni. Kwakwenzeka abanye abantu basuke ezindaweni zasemakubo bonile bebalekela izinto zabo. Inkosi yendawo entsha leyo uma ikutholile lokho yayikubizela esigcawini ukuthi uzoqula icala ngaphambi kokuthi bakuvumele uhlale endaweni yabo. Ngemuva kokuqula endaweni entsha kubalulekile ukuthi lowomuntu abuyele emuva ukuyobhekana namacala akhe. Lendlela yayenza nokuthi bakwazi ukumethemba.
Like every household with rules, a district also has rules to be followed by its people. In this article we look at the naming and differentiating of each household because most houses have identical surnames, as well as rules to be followed by visitors in the district or valley. For instance, in a valley when a family is expecting a visitor they should inform the leader of the community of such visit prior to the arrival of that person. On the day of arrival they should also inform the leader that the visitor arrived safely, the next morning that person should report to the leader of the community who then ask about the reason of the visit and the duration of their stay.
Tags Abantu, Ekhaya, Home, People	Post navigation